စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို ပရိသတ်ကို ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ် - Cele GabarCele Gabar
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ မြန်မာ့ဂီတလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတိုင်အောင် နာမည်တစ်လုံးနဲ့ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ အောင်မြင်နေဆဲ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဆိုတာကိုတော့ ပြောပြစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူးနော် ။ ဒီနေ့ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ကတော့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ အသက် ၄၀ ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် အောင်မြင်မှုကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သလို အသက် ၄၀ လို့ မထင်ရလောက်အောင် နုပျိုနေဆဲ ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူးနော် ။ ခုလို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထိကြာအောင် အောင်မြင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့အကြောင်းကို စမိုင်းလ်က ပရိသတ်ကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဆို တာဦးပီတာနဲ့အတူတူသူမ တို့စပြီးအနုပညာလုပ်ကြစဉ်ထဲက VCD တွေခေတ်ကမနားတမ်းစိုင်းစိုင်း နဲ့ အတူတူရိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် ။ Strand hotel မှာစိုင်းစိုင်း သီချင်းစဆိုတော့လူတွေရဲ့အအော်ခံပြီးသီချင်းကိုပြီးအောင်ဆိုသွားခဲ့တယ် လို့ သူမ အမှတ်ရနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ စိုင်းစိုင်း သီချင်းခွေထွက်တော့လည်း သူမနဲ့အတူ ဖူဆန်မှာကြော်ငြာရိုက်ကြ သလို စိုင်းစိုင်း နဲ့စခင်ကတည်းက သူရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့် ကအလုပ်တိုင်းကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့  လုပ်တယ်ကြိုးစားတယ်..နောက်ပိုင်းသူမ သရုပ်ဆောင်ပိုလုပ်ဖြစ်ေ တာ့စိုင်းစိုင်း နဲ့သိပ်မရိုကိဖြစ်တော့ ဘူးဆိုပေမယ့် သူမ နိုင်ငံခြားကပြန်လာ တဲ့အခါမှာတော့ အောင်မြင်မှုကကြောက်ခမန်းလိလိဖြစိနေတာတွေ့ရတော့မအံ့သြပေမယ့် rapper တွေဒီလောက်များတဲ့ခေတ်မှာသူဘာလို့ခုထိအောင်မြင်နေတာ လဲဆိုတာထူးဆန်းနေတယ် လို့စမိုင်းလ်က ဆိုပါတယ် ။
“ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိစိုင်းစိုင်း ဘာလို့အောင်မြင်နေတယ်ဆို တာသိလိုက်ရတော့ မထူးဆန်းတော့ဘူး… သူဘာလို့အောင်မြင်နေလဲဆိုတော့ သူပရိတ်သတ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်.. ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်တာကိုလက်ခံနိုင်တယ်.. အဓိကကသူဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်. ခတ်ကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာတယ်.. သူ့ market ကိုသူသိတယ်. . Business mind ရှိတယ်… အောင်မြင်မှုပေါ်မှာရစ်မူးပြီးမနေဘူး မနားမနေကြိုးစားတယ်.. အသက်ကြီးပေမဲ့မပျက်စီးသေးဘူး Congratulations and Happy Birthday သူငယ်ချင်း နောက်အနှစ်လေးဆယ်ထိပွဲတွေလုပ်နိုင်ပါစေ “ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ စိုင်းစိုင်းကို ချီးကျူး ပြီး မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရဲ့ အကွောငျးတှကေို ပရိသတျကို ဖှငျ့ဟလိုကျတဲ့ စမိုငျးလျ
စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ မွနျမာ့ဂီတလောကမှာ ဆယျစုနှဈတဈခုတိုငျအောငျ နာမညျတဈလုံးနဲ့ရပျတညျလာခဲ့တဲ့ အောငျမွငျနဆေဲ အဆိုတျောတဈယောကျဆိုတာကိုတော့ ပွောပွစရာလိုမယျမထငျတော့ပါဘူးနျော ။ ဒီနေ့ ဧပွီလ ၁၀ ရကျနကေ့တော့ စိုငျးစိုငျးရဲ့ အသကျ ၄၀ ပွညျ့မှေးနလေ့ေးဖွဈပွီး ယနတေို့ငျ အောငျမွငျမှုကိုရရှေညျထိနျးသိမျးထားနိုငျသလို အသကျ ၄၀ လို့ မထငျရလောကျအောငျ နုပြိုနဆေဲ ဆိုတာကိုတော့ ငွငျးလို့မရပါဘူးနျော ။ ခုလို ဆယျစုနှဈတဈခုထိကွာအောငျ အောငျမွငျနဆေဲဖွဈတဲ့ စိုငျးစိုငျးရဲ့အကွောငျးကို စမိုငျးလျက ပရိသတျကိုမြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ ။
စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျဆို တာဦးပီတာနဲ့အတူတူသူမ တို့စပွီးအနုပညာလုပျကွစဉျထဲက VCD တှခေတျေကမနားတမျးစိုငျးစိုငျး နဲ့အတူတူရိုကျခဲ့ကွတယျလို့သိရပါတယျ ။ Strand hotel မှာစိုငျးစိုငျး သီခငျြးစဆိုတော့လူတှရေဲ့အအျောခံပွီးသီခငျြးကိုပွီးအောငျဆိုသှားခဲ့တယျ လို့ သူမ အမှတျရနဆေဲ ဖွဈတဲ့ အကွောငျးလေးကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ ။ စိုငျးစိုငျး သီခငျြးခှထှေကျတော့လညျး သူမနဲ့အတူ ဖူဆနျမှာကွျောငွာရိုကျကွ သလို စိုငျးစိုငျး နဲ့စခငျကတညျးက သူရဲ့ကောငျးတဲ့အကငျြ့ကအလုပျတိုငျးကိုစိတျဝငျတစားနဲ့ လုပျတယျကွိုးစားတယျ..နောကျပိုငျးသူမ သရုပျဆောငျပိုလုပျဖွဈေ တာ့စိုငျးစိုငျး နဲ့သိပျမရိုကိဖွဈတော့ ဘူးဆိုပမေယျ့ သူမ နိုငျငံခွားကပွနျလာ တဲ့အခါမှာတော့ အောငျမွငျမှုကကွောကျခမနျးလိလိဖွစိနတောတှရေ့တော့မအံ့သွပမေယျ့ rapper တှဒေီလောကျမြားတဲ့ခတျေမှာသူဘာလို့ခုထိအောငျမွငျနတော လဲဆိုတာထူးဆနျးနတေယျ လို့စမိုငျးလျက ဆိုပါတယျ ။
“ ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျထိစိုငျးစိုငျး ဘာလို့အောငျမွငျနတေယျဆို တာသိလိုကျရတော့ မထူးဆနျးတော့ဘူး… သူဘာလို့အောငျမွငျနလေဲဆိုတော့ သူပရိတျသတျကိုတနျဖိုးထားတယျ.. ကောငျးတာပဲဖွဈဖွဈ ဆိုးတာပဲဖွဈဖွဈဝဖေနျတာကိုလကျခံနိုငျတယျ.. အဓိကကသူဆကျဆံရေးကောငျးတယျ. ခတျကိုအမွဲမပွတျလလေ့ာတယျ.. သူ့ market ကိုသူသိတယျ. . Business mind ရှိတယျ… အောငျမွငျမှုပျေါမှာရဈမူးပွီးမနဘေူး မနားမနကွေိုးစားတယျ..
အသကျကွီးပမေဲ့မပကျြစီးသေးဘူး Congratulations and Happy Birthday သူငယျခငျြး နောကျအနှဈလေးဆယျထိပှဲတှလေုပျနိုငျပါစေ “ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ စိုငျးစိုငျးကို ခြီးကြူး ပွီး မှေးနဆေု့မှနျကောငျးလေးတောငျးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
Previous Previous post: ဒေါင်း ဘာ့ကြောင့် Best Actor Award ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Star Awards
Next Next post: ရန်ကုန်မှာ အခြေချနေတဲ့ နယ်ကလူငယ်တွေရဲ့သိပ်ကိုခက်ခဲတဲ့ဘဝကို မီးမှောင်ထိုးပြနေတဲ့ မိုးမခအိမ်မက်ခရမ်းပြာ အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ Eternal Gosh
Published: March 17, 20191:59 pm
မမတွေကိုမှ ချစ်တတ်တဲ့ မောင်လေးတွေအတွက် Team143 ရဲ့ မတ်မတ် MTV
Published: March 15, 20197:45 pm
(၂၀၁၉ ) မှာ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်း ပရိသတ်ကို အသိပေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း
Published: March 17, 201912:41 pm